Type D | ရောင်းရန် | လုံးချင်းအိမ် | 0.00 သိန်း | ShweProperty
ရောင်းရန် - လုံးချင်းအိမ် - Type D
Maharsi Tharthana Yeik Thar Street
ဗဟန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Listed on 19 February 2016 | Ask for price ဧရိယာ: 5075 sqft
ဗဟန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဧရိယာ: 5075 sqft
3 Storeyed/2Storeyed
အသင့်နေ ပါကေးခင်း ဂျိုးဖြုရေ Master Bedroom Overhead Tank Own Meter Transformer Full Decoration Power and lighting Line Emergency Fire Fighting System Kitchen Room/Toilet/Bath Room ရေ+မီး အနီးအနားထင်ရှားသည့်နေရာများ
-Rose Hill Hospital -SSC Hospital
-Shwe Gone Daing Juction
Project Detail Htoo Villa 35
Htoo Construction Development Group CO.LTD
ဆက်သွယ်ရန် Htoo Construction Development Group CO.,LTD
No.(3,5,6,7,74), Pyay Road , Corner of Pyi Htaung Su Yeik Thar Street, Dagon Township, Yangon, Myanmar.
4,000.00 USD ဧရိယာ5440 sqft
1,900.00 USD ဧရိယာ1780 sqft
40.00 သိန်း ဧရိယာ4000 sqft
10.00 သိန်း ဧရိယာ1100 sqft
12.00 သိန်း ဧရိယာ1500 sqft
13.00 သိန်း ဧရိယာ1650 sqft
စပြီးရှာရန် ဆက်သွယ်ရန် Htoo Construction Development Group CO.,LTD
ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ် ဗဟန်း ကို စိတ်ဝင်စားပါသည်။ ဒီအိမ်ခြံမြေ နှင့်ပါတ်သတ်သော အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား ပေးပို့ စေလိုပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Enter the Captcha
Advertiser : Htoo Construction Development Group CO.,LTD
Phone no: 01-2302100